Madaxda sare ee DF Soomaaliya oo lagu wado inay safar ku tagaan gobolka Gedo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxda sare ee DF Soomaaliya oo lagu wado inay safar ku tagaan...
Madaxda sare ee DF Soomaaliya oo lagu wado inay safar ku tagaan gobolka Gedo
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxda Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay dhawaan safar ku taggi doonaan Degmooyinka Gobolka Gedo, kadib la wareegistii Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa toddobadyadii la soo dhaafay la wareegay gacan ku haynta Degmooyinka Luuq, Doolow iyo BeledXaawo, oo leesku yiraahdo (Daawo).
Guddoomiye Kuxigeenka Maamulka Gobolka Gedo, Cismaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in Madaxda Qaranka, sida Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhuba ay dhawaan booqanayan gobolka, sida uu yiri.
Cismaan Nuur Xaaji oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha ayaa sheegay ciidamadii ay dhawaan dowladdu geysay gobolka inay iminka ka hawlgalayaan xuduudaha gobolka, isagoona faraha inay amniga xaqiijiyaan.
Sida uu sheegay Cismaan Nuur Xaaji, guddoomiye Kuxigeenka Gobolka Gedo waxaa ay booqasho Madaxda Dowladda la xiriirtaa dhiirangelin ku aadan is bedelka ay ka wadaan Ciidamada Dowladda.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Xafiisyada Madaxweynaha Somaliya iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, oo lagu xaqiijinayo safarka la sheegay inay Madaxda Qaranka ku taggayan Gobolkaasi Gedo.
Ka dib khilaafkii ka dhashay doorashadii uu murunka hareeyay, laguna soo doortay Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayay dowladdu bilowday culeys ay Jubbaland ugala wareegeyso Gobolka Gedo.
Masuuliyiinta Jubbaland ayaa waxay Dowladda Federaalka ku eedeeyeen inay Gobolka Gedo ka jarayaan Jubbaland inteeda kale.